नेपालीहरु अब मलेसिया जान पाउने यस्तो छ नयाँ प्रक्रिया ? -
Home News नेपालीहरु अब मलेसिया जान पाउने यस्तो छ नयाँ प्रक्रिया ?
मलेसियामा लामो समयदेखि जारी आवागमन नियन्त्रण आदेश (एमसिओ) खुकुलो हुने भएको छ ।
पछिल्लोपटक मलेसियन सरकारले कोभिड-१९ नियन्त्रण गर्ने हेतुले जारी गरेको नेसनल रिकभरी प्लान (पिपिएन) अन्तर्गत नेपाल लगायतका पाँच देशका आप्रवासीहरुलाई प्रवेश खुला गरेको हो ।
मलेसियामा बस्ने विदेशि नागकिरहरुले पनि बिना विभेद खोप पाउने भएकोले सरकारले बारम्बार सबैले खोप लगाउन अनुरोध गरिरहेको छ । अबैधानिक हैसियतमा रहेका नागरिकहरुले पनि कुनै पनि डकुमेन्ट बैधानिक प्रमाणपत्र बिना खोप लगाउन पाईन्छ
Previous articleमलेशिया सरकार ले नेपाल लाई लगाएको प्रतिबन्ध खोल्यो।
Next articleलोकबहादुर कार्कीका बाउ र भाई, खड्गबहादुरका बाबुछोरा मिलेर तेजबहादुरको परिवारको ह,’त्या